Cl2 (chlorine) + H2O (biyo) = HCl (hydrogen chloride) + HClO (hypochlorous acid) | Isla'egta Falcelinta Kiimikada ee dheellitiran
Cl2 H2O = HCl HClO | Isu dheellitirka Kiimikada
biyo = hypochlorous acid
koloriin biyaha koloriin koloriin aashitada dhiiga
(kh) (lng) (dd) (dd)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Cl2 + H2O → HCl + HCLO
Waa maxay xaaladda falcelinta ee Cl2 (chlorine) ay kaga falceliso H2O (biyaha)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa HCl (hydrogen chloride) iyo HClO (hypochlorous acid)?
Ku dar gaaska koloriin ku jirta galaas biyo ah, ku dar qolka muunadda xaanshiyaha xalka la helay
Dhacdada ka dib Cl2 (chlorine) waxay la falgashaa H2O (biyo)
Falcelinta koloriinku waxay ku jirtaa laba jiho oo iska soo horjeedda. Biyaha koloriin waa isku-darka maaddooyinka sida Cl2, HCl, HClO markaa waa jaalle iyo cagaar. Markii hore asiidhku wuxuu warqadda litmus ka dhigaa casaan, laakiin markaa waa la qurxiyaa sababtoo ah qiijiid xoog leh ee HCl.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Cl2 + H2O → HCl + HCLO
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee HCl (biyaha)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh HCl (hydrogen chloride) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee HClO (biyaha)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh HClO (hypochlorous acid) alaab ahaan?
(kh) (lng) (lng) (lng)
Heerkulka: 700 ° C
Chlorine waxay kula falgashaa uumiga heerkulkeedu yahay 700 darajo Celsius
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga HCLO (hypochlorous acid), oo ka muuqda dhamaadka jawaab celinta.
(xanh xanaaq) (xoog leh) (xoog leh) (xoog leh)